Himalaya Dainik » अनौंठो सम्वन्धविच्छेद !
आफन्तहरूले भन्न थाले कि पतिलाई चप्पललेले हिर्काउने महिला न वफादार हुन्छ, न पतिव्रता । यसलाई घरमा राख्नु भनेको आफ्नो शरीरमा आवधिक ज्वरो पालेको जस्तै हो । केही आफन्तहरूले त यहाँ सम्म भन्न थाले कि यस्तो महिलाको भ्रुण नै अन्त्य गरी दिनु पर्दछ ।
नराम्रा कुराहरु चक्रिय ब्याजको जस्तो गरी बढ्दै जान्छन्, त्यसैले दुबै पक्षहरूमा धेरै आरोपहरू लगाउन थालियो । दुबै पक्षका मानिसहरूले आरोपहरूको भलिबल खेले जस्तै लाग्थ्यो । केटाले केटीको बारेमा र केटीले केटाको बारेमा धेरै असुविधाजनक कुराहरु भने ।
धेरै पटक तिनीहरू दुबैको बयान परिवर्तन हुन थाल्यो भने फेरी होस गरी हाल्थे । अन्त्यमा, त्यै भयो जो सबैले चाहन्थे ……सम्वन्ध-विच्छेद !
मुद्दा दायर गरियो । श्रीमानले “चरित्रहीनताको” मु द्दा हालेका थिए भने श्रीमतीले “दाइजो उत्पीडनको” । विवाहित जीवनको छ वर्ष पछि र बच्चाका बाबुआमा भएपछि दुबैको आज सम्बन्धविच्छेद भयो । ती दम्पतीको हातमा सम्वन्धविच्छेदको कागज थियो । दुबै मौन थिए, दुबै शान्त । मुद्दा दुई बर्ष सम्म चल्यो । दुई वर्ष देखि श्रीमती छुट्टिएर बसिरहेकी थिईन् र श्रीमान पनि । मु-द्दाको सुनवाईमा दुइटैलाई आउनु पर्ने हुन्थ्यो ।
दुवैले एक अर्कालाई हेर्दा रिसाएका हुन्थे, एउटाले हेर्दा अर्कोको अनुहार नदेखिने गरि बस्थे, जानाजानी एक अर्कालाई बेवास्ता गरिरहेको जस्तो देखाऊँथे । वकील र आफन्त दुबैसँग हुन्थे । आफन्तहरुको सहानुभूतिमा अलि अलि विस्फोटक सामग्री पनि लुकेको हुन्थ्यो । दुबैलाई के भन्ने भनेर राम्रो पाठ सिकाइएको हुन्थ्यो, दुबै त्यही भन्थे । धेरै पटक तिनीहरू दुबैको बयान परिवर्तन हुन थाल्यो भने फेरी होस गरी हाल्थे । अन्त्यमा, त्यै भयो जो सबैले चाहन्थे ……सम्वन्ध-विच्छेद !
पहिले आफन्तहरूको फौज साथमा हुन्थ्यो, आज उनीहरूसँग थोरै आफन्तहरू थिए । दुबै पक्षका आफन्तहरू खुशी थिए, वकिलहरू खुशी थिए, आमा बुबा पनि खुशी थिए । सम्बन्ध-विच्छेद भई सकेका पति पत्नी मौन थिए । यो संयोग मात्र हो कि दुबै पक्षका आफन्तहरू एकै चिया पसलमा बसेर चिसो पेय पदार्थ र चिया सेवन गरी रहेका थिए । यो पनि एक संयोग थियो कि सम्बन्धविच्छेद भएका पति र पत्नी एकै टेबलमा आमने सामने बसे । काठको बेंच र तीं दुई …….
“मैले धेरै मान-सिक तनाव भोगेकी छु”, महिलाको स्वर प्रष्ट थियो, न कुनै दुःख न रिस ।
“थाहा छ…! एउटा पुरुषले एउटी महिलालाई यही हतियारले आ-क्रमण गर्छन् जसले महिलाको दिमाग र प्राणलाई मा-र्छ …तिमी प्रष्ट छौ । मैले तिम्रो बारेमा यस्तो फोहोर कुरा गर्नु हुँदैन थियो, म धेरै दु:खी छु ।” भन्दै उनले टाउको निहुराए ।
महिलाले पुरुषलाई हेरिन्, हेर्दै रहिन् एकटक…! मान्छे को अनुहारमा छापिएको त-नाव पढ्न जस्तै ।
दुबै पक्षका आफन्तहरू छक्क परे । दुबै पति र पत्नी सँगै घरतिर लागे । त्यो घर जो केवल श्रीमान् र श्रीमतीको मात्र थियो ।